BUDDHIST TERMS' Dictionary: STINGINESS - မစ္ဆရိယ
STINGINESS - မစ္ဆရိယ
မစ္ဆရိယ (Macchariya) - မပေးရက်လိုမှု နှမြောဝန်တိုမှု၊ နှမြောစေးနှဲမှု၊ မိမိပိုင်ဆိုင်သော စည်းစိမ်ပစ္စည်းများ သူတစ်ပါးတို့နှင့် မဆက်ဆံစေလိုမှု။
မစ္ဆရိယသည် စေတသိက်တရား တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ယင်းဝန်တိုမှု မစ္ဆရိယသည် -
(၁) အာဝါသမစ္ဆရိယ - ကျောင်း, အာရာမ်, အိမ် စသည်တို့၌ ၀န်တိုမှု၊
(၂) ကုလမစ္ဆရိယ - ဆွေမျိုးဉာတိ ဒါယကာ, ဒါယိကာမတို့၌ ၀န်တိုမှု၊
(၃) လာဘမစ္ဆရိယ - ပစ္စည်းလာဘ်လာဘတို့၌ ၀န်တိုမှု၊
(၄) ၀ဏ္ဏမစ္ဆရိယ - ရုပ်အဆင်းသဏ္ဍာန်တို့၌ ၀န်တိုမှု၊
(၅) ဓမ္မမစ္ဆရိယ - တရားတော်၌ ၀န်တိုမှု - ဟူ၍ ငါးမျိုးရှိပါသည်။
Stinginess is reluctance to share what one has with others.
Stinginess isamental concomitant. There are five kinds of stinginess :-
(1) Stinginess regarding one’s dwelling place, avᾱsamacchariya;
(2) Stinginess regarding one’s relations and disciples, kulamacchariya;
(3) Stinginess regarding one’s material gains, lᾱbhamacchariya;
(4) Stinginess regarding one’s own appearance, vannamacchariya; and
(5) Stinginess regarding one’s religious doctrine, dhammamacchariya.